Madaxweynaha Soomaaliya oo barlamanka ugu mahad celiyay ansixinta Raysal warsaaraha – WARSOOR
Muqdisho-(warsoor)-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa uga mahadceliyay mudanayasha Baarlamaanka sida kalsoonida leh ee ay codka ku siiyeen.
Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in hadda wixii ka dambeeya ay dowladda u dhaqaaqi doonto dhanka dimoqraadiyadda, waxaana uu intaa ku daray in dowladad ay xoogga saari doonto arrimaha dib u heshiisiinta, dhismaha axsaab siyaadeed iyo xoojinta la dagaallanka Argagixisada Al-Shabaab.
Madaxweyne Farmaajo ayaa ugu baaqay dhallinyarada ay marin habaabiyeen argagixisada Al-Shabaab inay ka faa’iideystaan baaqa dowladda oo ay ka soo tegaan kooxaha dhibaateynaya.
Madaxweynaha ayaa sheegay in afarta sano ee soo socota ay dowladdu ku shaqeyneyso rabitaanka shacabka.
Guddoomiyaha Baarlaamanka mudane Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa soo xidhay kalfadhigii maanta.